Akụkọ - akpa na nkwakọ ngwaahịa
Kedu ka esi eme ka njikwa mma dị ike na ntinye nke akpa na igbe n'ọhịa nri?
Ihe mejupụtara akpa n'ime igbe bụ akpa nwere ngwaọrụ mpụta mmiri na katọn corrugated n'èzí. E jiri ya tụnyere omenala ụdị nkwakọ ngwaahịa, igbe igbe nwere ogologo ndụ ndụ (igbe mmanya, ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi nwere ike idowe akpa akara 2-3 afọ, mgbe mmeghe nwere ike ịzọpụta 2 ọnwa), mma zere ìhè na oxygen iguzogide arụmọrụ, na nnọọ ole na ole. ihe na nwere ike imegharị ihe, nwere ike ịbụ na otu ihe na-ejuputa ihe na-edozi ụdị dị iche iche nke ngwaahịa, Kwesịrị ekwesị maka aseptic / non-aseptic / oyi ndochi / ọkụ ọkụ na ndị ọzọ nhazi usoro, nwere ike melite nchekwa na njem arụmọrụ. Ngwa nke akpa n'ime igbe dị n'ọhịa nri na-agbasawanye, mana n'ihi kọntaktị kpọmkwem na nri mmiri mmiri, nchekwa ya na-emetụta nchekwa nri nri, nke bụkwa otu n'ime isi njikwa mma nke ụlọ ọrụ mmepụta nri mmiri mmiri.
Nyocha àgwà akpa ime
Ndị na-emepụta nri mmiri mmiri ga-eji nlezianya nwalee àgwà nke akpa ime na igbe dị n'èzí mgbe ha na-azụta akpa ahụ n'ime igbe ahụ, ma jụọ maka akụkọ nyocha mgbe ịzụrụ. Tupu ejiri ya, nyocha nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-emekwu nyocha nchekwa, ule ahụ ruru eru, nwere ike ịga n'ihu na usoro nkwakọ nri ọzọ.
1. Nnwale arụmọrụ ikuku nke ime akpa
Nguzogide gas na-ezo aka n'ihe mgbochi nke ihe nkwakọ ngwaahịa BIB na oxygen. Nguzogide gas bụ ihe dị mkpa na-emetụta àgwà ngwaahịa na ndụ nchekwa, ọ bụkwa ihe dị mkpa iji nyochaa ndụ nchekwa.
Ọ bụrụ na ihe nkwakọ ngwaahịa BIB nwere nguzogide gas na-adịghị mma, ọ ga-eduga na oxidation na mmebi nke ọdịnaya n'ihi mmetụta nke ikuku oxygen. A na-atụle nguzogide gas site na ọnụọgụ gas site na ihe.
2. Nnwale arụmọrụ na-emechi akpa ime
Ịrụ ọrụ mkpuchi na-ezo aka na ntụkwasị obi nke akara nkwakọ ngwaahịa BIB, site na ule ahụ nwere ike hụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa niile, gbochie mmepụta ngwaahịa ahụ adịghị mma, na-ebute nkwụsị, mmetọ, mmebi na nsogbu ndị ọzọ.
Enwere ọtụtụ ụzọ nke akara ule arụmọrụ, usoro a na-ejikarị bụ iji ngwa nyocha akara, na-eji usoro anya, na-eleba anya mgbake nlele ule. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale n'ụzọ ole na ole nrụchichi na ntapu nke nkwakọ ngwaahịa BIB, ị nwere ike iji ụkpụrụ nke ezigbo nrụgide akara ngosi arụmọrụ akụrụngwa.
N'ezie, mgbe n'ịhụ na gas na-eguzogide arụmọrụ na akara arụmọrụ nke BIB nkwakọ bụ ndị ruru eru, ọ dịkwa mkpa ịchịkwa ụfọdụ ndị ọzọ na-egosi dị ka akara ike na tensile arụmọrụ iji hụ na shelf ndụ na adaptability nke ọdịnaya ya.
Oge nzipu: Ọktoba 25-2021